LATAM ichaenderera USA uye Chile Service chete
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » LATAM ichaenderera USA uye Chile Service chete
Airlines • nhandare yendege • Brazil Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Chile Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
LATAM Airlines Boka pamwe nevakabatana naro vazivisa nhasi kuti vachamira kumbomira mamwe mabasa epasi rose kusvika Kubvumbi 30, 2020, nekuda kwekurambidzwa kwekufamba kunoiswa nezviremera zvemunyika uye kuderera kwakaderera kunokonzerwa nedenda re COVID-19 (Coronavirus).
Vapfuuri vanokanganiswa nekudzimwa kwendege havafanirwe kutora chero chiito nekukurumidza. Kukosha kwetikiti ravo kuchangoitwa pacharo sechikwereti panzendo dzeramangwana nekwanisi yekugadzirisazve ndege kusvika kuna Zvita 31, 2020, pasina muripo wekuwedzera.
Ndege dzenyika dzepasi rose dzinoenderera dzichishanda nematanho mashoma:
LATAM Airlines Brazil neLATAM Airlines Group vachashanda pakati peSantiago / SCL neSão Paulo / GRU.
LATAM Airlines Brazil neLATAM Airlines Group vacharamba vachibhururuka kubva kuSão Paulo kuenda kuMiami neNew York pamwe nekushandira Miami neLos Angeles kubva kuSantiago.
Kuenderera mberi kwenzira idzi, kana kumutswazve kwemamwe masevhisi epasi rose, kunoenderana neshanduko kumiganhu yekufamba yakatemwa nenyika dzinoshanda pamwe neboka uye dzichaziviswa nekufamba kwenguva.
Dzimwe nzira dzenyika dzese dzinoshandiswa neLATAM Airlines Boka uye vanobatana naro vachambomiswa.